mercredi, 04 juillet 2018 20:21
Tampon’Ihorombe (RN7): Lozam-pifamoivoizana naharatrana olona 12
Androany alarobia 4 jolay tamin’ny 3ora tolakandro no nisehoan’ny loza teo tampon’Ihorombe, 35 km atsimon’i Ihosy tampon-tanàna manaraka ny lalam-pirenena faha-7.
Fiara mpitatitra manao zotra Antsirabe-Toliara no vaky kodiarana teo ampandehanana mafy, ka izay no nampitsikasina azy tamin’ny arabe, niteraka ny loza.
Naratra ny 12 tamin’ireo mpandeha tao anatiny, ka voa mafy ny 5 tamin’ireo. Nanamora ny fitaomana ireo naratra ny fisian’ny Ambulance ao amin’ny hopitalin’i Ihosy.
mercredi, 04 juillet 2018 18:41
Vondrona Eropeana: Nitondra fanampiana ho an'ny zotram-pifidianana eto Madagasikara
Notanterahina androany teny amin’ny ministeran’ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana Nanisana ny fandraisan’ny Vondrona Eropeana anjara ao anatin’ilay kitapom-bola iombonana ao amin’ny tetik’asa ho fanohanana ny zotram-pifidianana eto Madagasikara na ny Soutien Au Cycle Electoral de Madagascar (SACEM).
Izany moa no natao dia hoentina hikarakarana fifidianana madio, azo antoka, demokratika, milamina ary andraisan’ny rehetra anjara eto amin’ny firenena Malagasy.
mercredi, 04 juillet 2018 16:26
Morondava: Dahalo efatra, misy olona ambony manery ny hamotsorana azy
Notafihin’ny dahalo tao Ampandra, Kaominina Analaiva ny 20 jona 2018. Omby niiisa 225 no indray very tamin’io. Nanao fanarahan-dia ny Fokonolona sy ny mpitandro ny filaminana. Tratra tao Tanambao, Kaominina Mandabe, Distrikan'i Mahabo, ny 3 tamin’ireo omby, nisy 100 hafa koa hita tao Andranotakatra ao amin’io Kaominina io hatrany.
Dahalo 5 lahy no voasambotra, ka ny 3 azon’ny Miaramila, ny 2 azon’ny Zandary. Voarohirohy tamin’ny fanafihana mitam-piadiana samihafa nitranga tamin’iny faritr’i Menabe iny izy ireo.
Re anefa ankehitriny fa misy manamboninahitra ambony sy mpanao politika ato Menabe, manao tsindry amin’ny hamotsorana ireo olona voasambotra ireo. Tranga izay ahiana hampiraviravy tanana ny mpitandro ny filaminana ary koa mety hampahazo vahana ny fitsaram-bahoaka, ity farany izay nilazan'ny praiminisitra Ntsay Christian fa tsy azo ekena intsony, fa atolotra ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana, izay olon-dratsy.
mercredi, 04 juillet 2018 13:33
« Parc de l’Est » - Antsirabe: Zary toa fieren-jiolahy ankehitriny
Potika ny ankamaroan’ireo foto-drafitrasa iraisana ao amin’ny « Parc de l’Est », ato amin’ny Kaominina ambonivohitra Antsirabe. Isan’ny toeram-pitsangatsanganana nahasarika ny olona rehefa faran’ny herinadro io toerana io teo aloha saingy ravain’ny olona ireo seza hakana ny vy ao anatiny.
Fananan’ny Kaominina ambonivohitra izy io, ary nisy fikarakarana niarahana tamin’ny fikambanana tsy miankina, saingy rava tanteraka izany, hany ka toa fieren-jiolahy ny « Parc de l’Est » ankehitriny.
Tsy fantatry ny mpitondra ve sa tsy raharahiany tsotra izao ?
Morondava: « Opération » moto
Maro loatra ny loza ateraky ny moto eto an-drenivohitry ny faritra Menabe vokatry ny tsy fanarahana ny Lalàna mifehy ny fifamoivoizana.
Hanao fanentanana ho amin’izay fanarahan-dalàna izay ny Polisim-pirenena eto Morondava ka haharitra 20 andro izany, aorian’izay dia hisy fanasaziana ireo mpitondra moto izay mbola minia mandika ny Lalàna mifehy ny fifamoivoizana, toy ny tsy fitondrana aroloha, tsy fisian’ny jiro, tsy fananana « permis »…
Ny fihaonan’i Angleterre sy Colombie no nanakatona ny lalao ampahavalon-dalana amin’ny fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra, tanterahina any Russie ny 14 jona ka hatramin’ny 15 jolay 2018.
Nirava sahala 1 noho 1 ny roa tonta tao anatin’ny 90 minitra, fe-potoana ara-dalàna. Tsy niova ny isa taorian’ny fanalavam-potoana. Taorian’ny « tirs au but » no nivoaka ho mpandresy tamin’ny isa 4 noho 3 i Angleterre.
Hihaona amin’ny ampahefa-dalana, holalaovina amin’ny sabotsy 7 jolay, i Angleterre sy Suède. Ity farany izay nandrava ny nofinofin’i Suisse, resy tamin’ny 1 noho 0.
mercredi, 04 juillet 2018 13:18
Anivorano Avaratra: Mijaly rano ny mponina
Sahirana amin’ny fahazoana rano fisotro ny mponina aty amin’ny Kaominina Anivorano, Distrikan’Antsiranana II. Nampanatena ny hamaha olana ity fitondrana Rajaonarimampianina ity saingy tsy tanteraka izany hatramin’izao.
Efa nisy paompy fatsakana 40 eo teto an-toerana nefa tsy misy mandeha na iray aza amin’izao.
Lavadrano no akana rano amin’izao, tena sahirana ny mponina ka miantso ny hamahana olana.